कठिन यात्रा र कानुनी व्यवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार
कठिन यात्रा र कानुनी व्यवस्था
सन्दर्भ : सेतो छडी दिवस
आश्विन २९, २०७४ डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
काठमाडौँ — स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो । संविधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालभर स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र बसोबास गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
त्यसैले सबै नागरिकले मुलुकभर स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार राख्छन्। तर के देशका सबै नागरिकले सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकेका छन् त? के हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सबै नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेको छ त? यस्तै गम्भीर प्रश्नका उत्तरहरूको एउटा सानो पाटो हो, विश्व सेतो छडी दिवस (अक्टोबर १५)। अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र आकर्षण हुने केही प्रावधानमध्येमा पर्छ यो दिवस पनि। संसारका सबै दृष्टिविहीनलाई आवतजावत गर्न सहारा दिने एक मात्र उपकरण हो, सेतो छडी। यसको माध्यमबाट दृष्टिविहीनहरू स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न सक्छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) को धारा २० ले व्यक्तिगत गमनशीलताबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा धेरथोर व्यवस्था गर्न खोजेको पाइन्छ। हाम्रा कानुनहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभई महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक र अन्य विशेष पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको यात्रालाई समेत केही सहज वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको पाइन्छ। उल्लिखित व्यक्ति वा वर्गका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यात्रा बढी नै कठिन हुन्छ। त्यसमध्ये पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि यात्रा वा आवागमन अझ कठिन छ। हाम्रो देशका विभिन्न कानुनले गरेका विभिन्न प्रावधान आफंैमा धेरैथोर सकारात्मक छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो हुनाले सम्बन्धित वर्गले यसको सकारात्मक असरभन्दा बढी नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ‘हाम्रो देशमा केही छैन’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र हो। त्यसैले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान स्वत: लागू भएको छ। तर हाम्रो देशका दृष्टिविहीनले भने गमनशीलताको अधिकारलाई कष्टकर रूपमै भोग्दै आएका छन्। अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले अपांग र निजको सहयोगीसमेतलाई हवाईस्थल यात्रामा लाग्ने भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। बरु सेतो छडी लिएर बस बिसौनीमा कोही दृष्टिविहीन प्रतीक्षारत रहेछ भने ऊ अन्य कुनै व्यक्तिको सहायताबिना सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बीच बाटोबाट गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यतामा त उसको बिचल्ली नै हुने गर्छ। हुन त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का विभिन्न दफामा विभिन्न किसिमका सहुलियतको पनि प्रावधान नभएको होइन। नियमनकारी निकाय त्यति गम्भीर नभएको मात्र हो। केही सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, अपांग लेखिएका सिटहरू पनि देख्न पाइन्छ तर ती सिट अरूले ओगटेका हुन्छन्। अपांगता भएको व्यक्ति भीडभाडमा उभिइरहेको देखिन्छ। महिला लेखिएको सिटमा पुरुष बसिरहेको हुन्छ, छेवैमा सानो बच्चा काखमा लिएर महिला भीडमा उभिइरहेकी हुन्छिन्।
कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा तथा सहुलियतका प्रावधान सम्बन्धित दृष्टिविहीनले उपभोग गर्न नपाएको देख्दा भन्न मन लाग्छ, के यो देशमा कुनै कानुन छ? कानुनको कार्यान्वयन भइरहेको छ? नियमनकारी निकाय पनि छ? अपांगता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो राख्ने निकायले के गरिरहेको छ?
कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको उचित प्रयोग भएको छ छैन भनी निगरानी गर्ने राज्यका तीन अंग हुन्छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि यी तीन निकाय सक्रिय अवस्थामै छन्। तर तिनले आफ्नो काम चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्न सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। जुन मुलुकमा विधिशास्त्रीय रूपले सैद्धान्तिक पक्ष ख्याल गरी परम्परा र प्रथालाई आघात नपार्ने खालको र समाजबाट सहजै रूपमा स्वीकार्य एवं कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको कानुन बनाइएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हँुदैन। राज्यले भावनामा बहकिएर कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने प्रावधानयुक्त कानुन निर्माण गर्नु नागरिकको अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु हो। त्यसैले विधायकहरूले यो कानुन म आफैंले कार्यान्वयन गर्नु छ भन्ने मनसायले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भने कार्यकारीले पनि यो कानुन मैले नै बनाएको हो भनेर लागू गर्न सकिनेखालको हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने बेला गरिबी, अभाव, विपन्नता आदि देखाएर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नपट्टि जोड दिइन्छ। यसो गरी आम नागरिकलाई ढाँट्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति नै हो।
आशा राखौं, यस वर्षको सेतो छडी दिवसले विश्वभरिका आम दृष्टिविहीनलाई सहज रूपमा दिशाबोधको अवसर प्रदान गरोस्। संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयन होऊन्, सेतो छडी टेकेर कुनै निकायमा हारगुहार गर्न नपरोस्।
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७४ ०८:०२